सुपा देउरालीमा पुगेपछि गाडीको स्टार्ट किन बन्द हुन्छ …यस्तो छ रोचक कारण – Allindiabc
काठमाडौँमा आज मात्र थपिए यति धेरै कोरोना संक्रमित
एकै परिवारका ११ जनाको मृत्यु
यिनै हुन महिला जसले गोंगबुमा पुरुषको घाटी रेटेर हत्या गरेकी थिईन
गोंगबुमा मृत भेटिएका व्यक्तिको यस कारण गरिएको रहेछ हत्या ! कारण सुन्दा सबैको होस् उडियो
सरकारले हवाई उडान र लामो दुरीको सार्वजनिक बस भदौ १६ गतेसम्म नखोल्ने निर्णय
काठमाडौमा भीषण आगलागी
भखरै कोरोनाबाट थप ४ जनाको मृत्यु, मृतक संख्या ७९ पुग्यो
Home/रोचक खबर/सुपा देउरालीमा पुगेपछि गाडीको स्टार्ट किन बन्द हुन्छ …यस्तो छ रोचक कारण
सुपा देउरालीमा पुगेपछि गाडीको स्टार्ट किन बन्द हुन्छ …यस्तो छ रोचक कारण
सुपादेउरालीको मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आएका धर्मावलम्वीहरु ।ती जिल्लाहरूमा विवाह गरेपछि सुपादेउरालीको दर्शन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसपटकको दशंैको समयमा दर्शनार्थीको भीडका कारण मन्दिर आसपासमा गाडी पार्किङको समस्या देखिएको थियो । मन्दिर भिरको टाकुरामा रहेको कारण सो स्थानमा पार्किङको समेत समस्या देखिएको छ ।
अन्य समाचार, मेष राशि (चु,चे,चो,ला,लि,लु,ले,लो,अ) आज आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । आफन्तले गरेको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । दिनको उत्तरार्ध अधिक सुखद् रहनेछ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले उठाउन सक्नेछन । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ लगानिका लागि मित्रजनहरुकोराम्रो जीवनको लागि आफ्नो स्वास्थ्य र समग्र व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो प्रेमीलाई मन नपर्ने लुगा नलगाउनुहोस् किनकि यसले उनको चित्त दुखाउनेछ।
योग्य कर्मचारीहरुका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईंलाई बिहान बिजुलीको कटौति वा अरू केही कारणले तयार हुन बिलम्ब गर्नेछ, तर तपाईंको जोडी आएर उद्धार गर्नेछन्। साजेदारी दाभदायक रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । कार्य क्षेत्रमा मन लागेपनि सामान्य क्रुटि ले मानशिक चिन्ता दिलाउने छ ।
बृष राशि (इ,उ,ए,ओ,बा,बि,बु,बे,बो) मातृ पक्षको सहयोले बौधिक बिकासमा जुट्ने समय रहेको छ । लगनशीलताले कामहरू अगाडी बढ्नेछन् । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउला । अचल सम्पत्तिको कारोवार हुनेछ । तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। साँझमा छोराछोरीसँग केही सुखद समय बिताउनुहोस्। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन।
तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्; अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ ।सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगन सिलताका कारण मानसम्मान प्राप्तीको योग बन्नेछ । पारीबारीक झोर झमेला सताउन सक्नेछ । मान्यजनको साथ सहयोले आम्दानिका क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ
मिथुन राशि (का,कि,कु,घ,ङ,छ,के,को,ह) सामान्य यात्रा पश्चात कार्य सिद्यि हुनसक्ला । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु होला । मानसम्मानआज नयाँ नयाँ कार्य र शुभकार्यको योजना बन्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । आर्थिक कारोवार विस्तारै सुधार उन्मुख हुनेछ ।मा आचँ आउन सक्नेछ । नयाँ पारिवारिक उद्यम सुरु गर्न शुभ दिन। यस दिन धेरै सफलता गर्न अन्य सदस्यहरूको मद्दत लिनुहोस्। तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ।
आज तपाईंका कुनै पनि योजना बनाउनु अघि आफ्नो जोडीलाई सोध्नुभएन भने, तपाईंलाई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ। कार्य क्षेत्रमा उत्पन्न लापरवाहिले सरसामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । एक्लो निर्णयले दाजुभाई बिच मनमुटाब रहन सक्ला । पारीवारिक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला ।
कर्कट राशि (हि,हु,हे,हो,डा,डि,डु,डे,डो) मित्रजनको साथ सहयोले आक्स्मिक धनलाभ हुन सक्नेछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगानीको प्रतिफल प्राप्तनहुदा मनमा खिन्नता उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफ्नो ऊर्जा प्राप्त गर्न पूर्ण आराम गर्नुहोस्। जवानहरूले स्कूल परियोजनाहरूको लागि केही सल्लाह माग्न सक्छन्। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ। आज तपाईंको जोडी साँच्चै नै राम्रो मुडमा छ। तपाईंले एउटा आश्चर्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ। शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ ।
मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा रहला । परीवारका सदस्यहरु सगँ सामान्य बादबिवादको सामना गर्नु पर्नेछ । बोलिको प्रभाबको कारण मान्यजनको साथ पाईनेछ । स्बास्थ सम्बन्धि समस्यामा सुधार आउनेछ ।
सिंह राशि (मा,मि,मु,मे,मो,टा,टि,टु,टे) आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। तपाईंले एउटा मायालु र समझदार मित्र भेट्नु हुनेछ।
सह-कार्यकर्ता र अघीनस्तहरूले चिन्ता र तनाउ ल्याउनेछन्। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको लागि साँच्चै विशेष कुरा गर्नेछन्। बौधिक ब्यक्तित्वहरुको सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ । संगित तर्फ रुचिजाग्नेछ । बिश्वासिला ब्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा भने समय उत्तम रहनेछ । हराएका धनमाल प्राप्ति योग रहेको छ । आफन्तका बीचमा खटपट, चिन्ता र शङ्का उब्जनेछ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्ला । मनमा निराशा र शरीरमा आलस्य आउला ।
कन्या राशि (टो,प,पि,पु,ष,ण,ठ,पे,पो) दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । कुटुम्बको सहयोग मिल्नेछ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । ब्यपार ब्यवसायमा पारिवारिक साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । भोजभतेर जन्यकार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । साधारण खर्च भएतापनि दिन मध्यम रहनेछ । पारीबारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । सामान्य चोरमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ।
तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। तपाईंका नजिकैको कोइ अत्यधिक अप्रत्याशित मुडमा हुनेछ। यो दिन तपाईंको प्रेम जीवनको मामलामा शानदार छ। प्रेम गरि राख्नुहोस्। स-साना रूकावट भए तापनि यो ठूलो उपलब्धिको दिन हो जस्तो देखिन्छ, सहयोगिहरुले उनीहरूले मन पराएको वस्तु नपाएमा खिन्न भएको विचार गर्नु,होस्। तपाईंको आजको दिन आफ्ना जीवनसाथीसँग प्रेम, चुम्बन, अंकमाल, र मजा गरेर रोमान्समा बित्नेछ। ट पटकको सम्भाबना रहेको छ ।
तुला राशि (र,रि,रु,रे,रो,ता,ति,तु,ते) प्रेम सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब आउन सक्नेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । स्वादिष्ट भोजन पाईनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ लगानिका लागि मित्रजनहरुको साजेदारी दाभदायक रहनेछ । धनमालमा सामान्य क्षति हुने योग रहेको छ सजग रहनु होला ।
शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ लगानि गर्दा बिशेष होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ । तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। महत्वपूर्ण मान्छेहरू विशेष वर्गका मान्छेलाई केहि धन प्रदान गर्न तयार हुनेछन्। आज तपाईं उपस्थित हुने एउटा सामाजिक सभामा आकर्षणको केन्द्र बन्नु हुनेछ। प्रेमले सकारात्मक चटक देखाउने छ। तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो विवाह यति सुन्दर कहिल्यै भएको थिएन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
बृश्चिक राशि (तो,ना,नि,नु,ने,नो,या,यि,यु) आज वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा मन जाला । तपाईंले आफ्नो अतिरिक्त पैसा आउने समयमा लाभ हुने सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। बच्चाहरुसँग समय बिताउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईंको जीवनसाथीले पूरा दिन तपाईंको बारेमा सोच्छन्। काममा आज कुराहरू तपाईंको पक्षमा हुनेछन्। तपाईंको वैवाहिक जीवनले यस दिन एक रमाइलो चरण देख्नेछ। कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ला । दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ । बौधिक ब्यक्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त हुने समय रहेको छ ।
रचानात्मक कार्यमा जुट्ने उत्तम समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय राम्रो रहेकोछ । नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेको छ । शुभचिन्तकहरुको सङ्ख्या मा बृद्यि हुने छ । गाएन क्षेत्रमा रुचि जाग्ने योग रहेको छ ।
धनु राशि (ये,यो,भ,भि,भु,ध,फा,ढ,भे) भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुनेछ । कार्यक्षेत्रको प्रतिफल सोच अनुरुप नरहनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुन सक्नेछ । परीवारजनहरु सगँको सम्बन्धमा कार्य क्षेत्रका कारण सामान्य मदभेद रहन सक्नेछ । आज काममा केही प्रतिस्पर्धा र चुनौती सामना गर्नपर्ला । प्रेमप्रसङ्गमा समेत नरमाइलोपन आउनेछ । सन्तानपक्षको मायामा कमी आउनेछ । कार्य क्षेत्रमा यत्पन्न झन्झट पश्चात सभातपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। प्रेम यात्रा मीठो तर छोटो हुनेछ।
यदि तपाईंले लामो समयदेखि काममा कसैसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ भने, आज तपाईं भाग्यशाली हुन सक्नु हुनेछ। कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्। सम्मेलनमा सम्लग्न भईनेछ । मान्य जनहरुको साथ सहयोग प्रशस्त प्राप्त हुनेछ ।
मकर राशि (भो,ज,जि,खि,खु,खे,खो,गा,गि) नजिकका ब्यक्ति बाट धोका हुन सक्नेछ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । नयाँ व्यक्ति संग भेटघाट हुनेछ । व्यापारमा धनलाभ हुने योग छ । भूमिबाट लाभ नै रहला । सामान्य कार्यमा धेरै समय ब्यतित हुन सब्छ । दाजु भाई बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्नेछ ।
तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि तपाईंको भाइ तपाईंले सोचे भन्दा अझ बढी सहयोगी हुनेछ। आफ्नो प्रिय संगै नभएकोले तपाईंले आज परम आनन्दबाट खाली भएको अनुभव गर्ने सम्भावना छ। दिल बहलाउने र मनोरञ्जनका लागि आज राम्रो दिन हो तर यदि तपाईं काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो व्यापार-व्यवसायमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। प्रतिपक्षीहरु सबल रहेता पनि तपाईको कार्य क्षेत्रको प्रभाबताले कार्यहरु सहजता पूर्ण सम्पादित रहनेछन । कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला सामान्य अप्जस प्राप्त हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
कुम्भ राशि (गु,गे,गो,सा,सि,सु,से,सो,द) आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। तपाईंले सबैको मागको याद गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने धेरै समस्यामा पर्नु हुनेछ। आज प्रेममा आफ्नो विवेक शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। व्यापार साझेदारले सहायतापूर्ण व्यवहार गर्नेछन् र तपाईंले सँगै रहल काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो जीवनको प्रेम, आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई अद्भुत आश्चर्य दिन सक्छन्। खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला। आटँ शाहसमा कमि आउनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट आउन सक्नेछ । मनमा अस्थिरताले बास गर्नाले कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको योग रहनेछ । अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेता पनि स्बास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ । परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागी भईएला । प्रयत्न गरे बढी फाइदा लिन सकिनेछ ।
मीन राशि (दि,दु,थ,झ,ञ,दे,दो,च,चि) सामुहिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा साजेदारी उत्तम रहनेछैन । मान्यजनहरुको साथसहयोगमा आम्दानिका श्रोतहरु सबल तुल्याउन सकिनेछ । ब्यपार ब्यवसायमा जिबन साथीको सहयोग उत्तम रहनेछ । सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रमा सोचे अनुरुप समय दिन सकिने छैन । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ
विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । समाजसेवामा मन लाग्नेछ । रोकिएको काम दोहोर्याएर गर्दा फाइदा हुनेछ । घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं आज मितिमा जाने हो भने, विवादास्पद मुद्दाहरू नउठाउनुहोस्। कुनै पनि संयुक्त उद्यममा प्रवेश नगर्नुहोस् किनकि साझेदारहरूले तपाईंको फाइदा लिने प्रयास गर्नेछन्। केही विशेष आश्चर्य गरेर तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंलाई नराम्रो मुडबाट छुटकारा दिलाउनेछ।
अन्य समाचार, काठमाडौं। अमेरिकाको उटाहको वेष्ट जोर्डनमा बस्ती क्षेत्रमा अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासनको विमान बस्ती क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ९ महिनाका शिशुसहित ३ जनाको मृत्यु भएको समाचार एजेन्सी एपीले जनाएको छ । दुर्घटनामा कैयौं अन्य घाइते भएको बताइएको छ ।
संघीय उड्डयन प्रशासनका अनुसार पाइपर पीए ३२ विमान ६ जना यात्रुसहित साउथ भ्याली क्षेत्रीय विमानस्थलबाट उडेको थियो । ९ महिने शिशु, पाइलट र एक महिलाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ । एक महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको र २ वर्षका बालकको स्थिति स्थिर रहेको बताइएको छ । गम्भीर अवस्थामा रहेकी महिला विमान जुन घरमा खसेको थियो त्यही घरभित्र थिइन् । दुर्घटनाले एक घरमा आगो लागेको छ । दुर्घटनाको विषयमा संघीय उड्डयन प्रशासन र राष्ट्रिय यात्रा सुरक्षा बोर्डले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अन्य समाचार, सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।
अन्य समाचार, साताभरिको कामलाई बिश्राम लगाएर आराम गर्ने दिन आज शनिबार । तपाईंलाई आफ्नो मोटो शरीरले अलिअलि चिन्ता दिएको होला । तर थोरै सावधानी अपनाउनुभयो भने मोटोपनको समस्या चाँडै टाढा भाग्नेछ ।
अन्य समाचार, वीरगञ्ज महानगरपालिका– १० आदर्शनगरमा रहेका एक ६५ वर्षीय वृद्धको आज बिहान कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ । ती वृद्धको गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएको डा नीरजकुमार सिंहले राससलाई बताउनुभयो ।
भखरै मात्र काठमाडौं ९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
सधै काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन !
आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार यसरी गरिदैछ भगवान शिवको पूजा
सात दिनभित्रमा तपाईंले सोचेको काम बन्नेछ ? ॐ लेखि शे’यर गरौं
भर्खरै काठमाडौँ घट्यो मुटु काम्ने घटना ! देख्ने जतिको होस् उड्यो